CNC Router, လေဆာစက်, လှိုဓားခုတ်သမား - AccTek
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန3ဝင်ရိုးတန်း CNC Router
အသေးစား3axis CNC Router
5 & ​​4 ဝင်ရိုးတန်း CNC Router
ကျောက်ခေတ်သည် CNC Router
CNC သတ္တုအက္ခရာ တင်. စက်
Cylinder သည် CNC Router
AccTek mini ကိုသံမဏိစာရွက်ဖြတ်တောက်ခြင်း CNC သတ္တု plasma စက် AKP1010
rotary နှင့်အတူ 2000w ဖိုင်ဘာလေဆာပိုက်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက် AKJ1530F2
သစ်သား router ကို AKM1530C atc 3d CNC ထွင်းထုစက်
CNC Router များနှင့်လေဆာစက်၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်။ ကျနော်တို့နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏ရှေ့တန်းမှမှာဖြစ်ခြင်းများနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးအပေါငျးတို့သဒေသများတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ကျူးလွန်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မဟာဗျူဟာနိုင်ငံတကာဈေးကွက်တွင်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့အနေအထားရဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးသည်နှင့်ရေရှည်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုသေချာ။
Machi ဖြတ်တောက်ခြင်း high မြန်နှုန်း CNC Plasma သတ္တုစာရွက် ...
High Quality အထည်အလိပ်သားရေ CNC လှို Kni ...
စက် AK80C မှတ်သားနေပါသည် Reci 80w CO2 လေဆာ
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမြင့် Precision Mini ကို Fiber လေဆာ Cu ...
3mm သံမဏိ 1000W Professinal Tube ပိုက် ...
CNC ချည်မျှင်အထည်အလိပ်အဝတ်အစားကစားစရာမူလစာမျက်နှာဒင်ဗာမြို့မှ Dress ...
Acctek Multi CNC Router စက် AKM1020-10R ကြိုတင်
: D & B ကိုလက်မှတ်
CNC router ခြင်းနှင့်လေဆာစက်တဲ့ professional Manufacturing
ကျနော်တို့ဟာအလွန်လျင်မြန် turnaround နှင့်အတူကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်သောဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အရည်အသွေးထုတ်ကုန်များကိုကျူးလွန်နေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာဖောက်သည်များ၏အရည်အသွေးနှင့်ဖြန့်ဝေလိုအပ်ချက်များကိုနားလည်သူအနည်း၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ အားလုံးစက်စိတ်ထဲဖောက်သည် '' ကိုစောငျ့မြျှောတည်ဆောက်ဖြစ်ကြသည်။
လူအားလုံးတို့သည်စက်တွေမှန်ကန်စွာသည်၎င်း၏အကျင့်ကိုကျင့်သေချာစေရန်တင်ပို့မတိုင်မီအထက် 24hours အဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကအစီအစဉ်အတွက်ကို set up အဆိုပါ parameters တွေကို backup တစ်ခုရပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ FOB, CIF နှင့်တံခါးစက်တွေကြောင့်ကောင်းသောအခြေအနေရောက်ရှိသေချာစေရန်တစ်ဦးအထပ်သားအမှု၌ကောင်းစွာထုပ်ပိုးပါလိမ့်မည်သင်၏အ choosing.All များအတွက်တင်ပို့ပစ္စည်းများမှတံခါးကိုရောင်းချလျက်ရှိကြသည်။
Sales Service ပြီးနောက်
ကျနော်တို့ကိုသူတို့အွန်လိုင်း reply ပါလိမ့်မယ်ဆိုမေးခွန်းများ, အင်္ဂလိပ်စကားပြောဆိုနိုင်သူ 8 အဖွဲ့ဝင်များသည့်ဝန်ဆောင်မှုအသင်းရှိသည်။ လိုအပ်သောလျှင်, ငါတို့သည် installation နဲ့လေ့ကျင့်ရေးအဘို့သင့်အရပ်မှနည်းပညာရှင်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
Jinan AccTek Machinery ကုမ္ပဏီ [ .. ] ကျနော်တို့ Jinan စီးတီး, တောင်ဘက်ဘေဂျင်း၏ရှန်ဒေါင်းပြည်နယ်၏စက်မှုဇုန်အခြေစိုက်ခဲ့ကြ CNC Router များနှင့်လေဆာ machines.Since 2005 ထုတ်လုပ်အထူး
3-1007, Minghu ပလာဇာ, အမှတ် 777 Minghu အနောက်လမ်း, Tianqiao ခရိုင်, Jinan စီးတီး, တရုတ်
Guide- ကုန်ပစ္စည်းများ Products- Featured ဟော့ Tags- Sitemap.xml- amp မိုဘိုင်း
300w 500w လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက် Fiber, CO2 လေဆာအက္ခရာ တင်. စက် , Atc CNC Router အက္ခရာ တင်. စက် , စက်လေဆာမှတ်သားနေပါသည်, အက္ခရာ တင်. စက်ဖြတ်တောက်ခြင်း CO2 လေဆာ , စက်မှတ်သားနေပါသည်အကောင်းဆုံးလေဆာ,